१ सय ९२ पटक ड्राइभिङ टेस्टमा फेल ! - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
१ सय ९२ पटक ड्राइभिङ टेस्टमा फेल !
सडकमा सवारी चलाउनको लागि जो कोहीले पनि सरकारी नियमको पालना गर्नैपर्छ । यदि नियमको पालना नगरे ट्राफिकले नियमानुसार चिट काट्छ । सवारी चलाउनका लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स हुन अति आवश्यक छ । लाइसेन्स नभएमा जरिवाना लाग्छ । लाइसेन्स पाउन एक ड्राइभिङ टेस्ट पास गनुपर्छ ।
केही मानिस एक पटक, दुई पटक होइन, १० पटकसम्म पनि फेल भएका छन् । तर एक व्यक्ति १ सय ९२ पटक ड्राइभिङ लाइसेन्सको टेस्टमा फेल भएका छन् । तर उनले अझै हिम्मत हारेका छैनन् । उनी १७ वर्ष यता लाइसेन्स पाउने आशमा कोशिसरत छन् ।
यो अनौठो घटना पोल्याण्डको हो । त्यहाँको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार ती व्यक्ति १ सय ९२ पटक लाइसेन्सको ट्रायलमा फेल भएका हुन् । उनी ५० वर्षदेखि लाइसेन्स पाउन लागी परेका छन् । उनले यसमा अहिलेसम्म लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । यो भन्दा पहिला एक व्यक्तिले ११३ पटक ट्रायल दिएका थिए । ४० औँ पटकमा मात्र उनले ट्रायल पास गरेका थिए । यी व्यक्तिको नाम भने खुलाइएको छैन ।